प्रसाईंले मारेको सम्बन्धन दाउ : ‘बा’ प्रचण्ड त्यागेर ओली ‘हजुरबा’ – Health Post Nepal
प्रसाईंले मारेको सम्बन्धन दाउ : ‘बा’ प्रचण्ड त्यागेर ओली ‘हजुरबा’
२०७७ फागुन १९ गते ८:३४
नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं चर्चाको केन्द्रमा रहेको दशक भइसक्यो। राष्ट्रिय रुपले चर्चामा आएको चाहिं आधा दशक पुग्दैछ। तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ६ फागुन २०७४ मा भक्तपुरस्थित प्रसाईं निवासमा भेटघाट गरेका थिए, बाम एकताको पूर्वतयारीका क्रममा।
त्यसबीचकै एउटा संयोगले प्रसाईंको सार्वजनिक छविलाई उलटफेर गरिदियो। उनका सवारी चालकले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको एक तस्बिर क्षणभरमै भाइरल बन्यो। जसमा ओली र प्रचण्डलाई एउटै टेवलमा राखेर उनी भोजन गराइरहेका थिए। सबैको थालमा थियो मार्सी चामल।
व्यवसायीको घरमा बैठक बसेको भनेर ओली र प्रचण्डको आलोचना पनि भयो । प्रतिपक्षीले पनि आलोचना गरे।
प्रसाईंको सबै खाले उन्नयनमा सुरुदेखि नै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँगको घनिष्ट सम्बन्ध नै मूल कारण रहेको देखिन्छ। यतिसम्मकि प्रचण्ड मान्छेकै अगाडि प्रसाईंलाई भन्ने गर्थें, ‘यो दुर्गेले केही गर्छ ।’प्रसाईंले पनि प्रचण्डलाई ‘बा’ भनेर सम्बोधन गर्ने निकटस्थहरु बताउँछन्।
छोरा प्रकाश दाहालको निधन भएका वेला पनि प्रचण्ड बिर्तामोडस्थित प्रसाईंको बीएण्डसी हस्पिटलमै थिए । त्यतिमात्र होइन, कुनै कार्यक्रमका लागि पूर्वक्षेत्र आउँदा हरेक पटक प्रचण्ड बिर्तामोड पुगेकै हुन्थे।
यही कारण कतिपयले बीएण्डसी हस्पिटलमा प्रचण्डको लगानी छ भन्न पनि भ्याए । तर, प्रसाईंले चाहिं सधैँ बैंकबाट ऋण लिएर अस्पताल खोलेको बताउँदै आएका छन्।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रसाईंको बीएण्डसी हस्पिटललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन हरसम्भव प्रयास पनि गरे। तर, गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण सकेनन्।
अर्बौं लगानी गरेर मेडिकल कलेजको तयारी गरेपछि सम्वन्धन नपाएका कारण प्रसाईंको सार्वजनिक व्यवहार निकै उत्ताउलो र विवादास्पद रहँदै आएको छ।
माओवादी द्वन्द्वसँगै उदाएका प्रसाईं
झापा पुग्ने हरेक पार्टीका नेता प्रसाईंको हस्पिटलमा पुगेकै हुन्छन् । झापाका भद्र, भलादमीदेखि प्रहरी, प्रशासन र पत्रकारसम्मलाई उनले आफ्नो पकडमा राखेका छन् ।
सार्वजनिक मञ्चमै आफूले कक्षा ८ मात्र पास गरेको बताउने प्रसाईंले ०६२/०६३ को आन्दोलनअघि भैंसी फार्म खोलेका थिए। बिर्तामोडको खानदानी गिरी परिवारसँग नाता जोडेपछि उनको सुखद् दिन सुरु भएको निकटस्थहरु बताउँछन्।
‘त्यसैले ससुरा बलराम र सासु चन्द्रकलाको नामबाट अस्पतालको नाम बीएण्डसी जुराइएको हो’, उनीनिकट एक व्यक्तिले भने ।
जग्गा कारोबार थालेपछि प्रसाईंको आर्थिक उन्नति झन् बढ्यो । त्यसबाट हौसिएका उनले मेडिकल कलेज बनाउने सपना देखेका थिए। प्रारम्भमा उनलाई विश्वास गर्ने कमै थिए। तर, अहिले उनले बीएण्डसी र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल पनि ठड्याइसकेका छन्। र, यो सबै हुनुमा प्रचण्डको ठूलो सदासयता रहेको उनका निकटस्थ बताउँछन्।
तर पछिल्लो समय अवस्था यस्तो आयो कि उनी ‘बा’ प्रचण्ड’ लाई छाडेर ‘हजुरबा केपी’ तर्फ लागे। प्रतिनिसभा विघटन गरेसँगै प्रचण्डलाई एक्ल्याउने खेलमा लागेका र उनका निकटस्थलाई साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति अपनाएर आफ्नातर्फ तान्न लागेको सुइँको प्रसाईंले नपाउने कुरा थिएन।
र, ओलीको यही नीतिलाई प्रसाईँले आफ्नो हतियार बनाएका छन्, आफ्नो अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन । यही उपक्रममा उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीकै मुखबाट बिएण्डसीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाएको घोषणा गराउन सके। जहाँ ओलीले प्रसाईँको तारिफ गर्न हजारौं शब्द नै खर्च गरे।
विवादास्पद छवि भएका प्रसाईँलाई ओलीले ‘ब्रान्ड’ घोषित गरे। चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिस बिना नै ओलीको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रसाईँको कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थालिसकेको छ।
अर्थात्, प्रचण्डलाई देखाइदिन ओलीले प्रसाईँका लागि गैरकानुनी काम गरे । हुन त संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने ओलीलाई अन्य कानूनले के छोला र !
नेता खेलाउन चतुर प्रसाईंले ओलीलाई खुसी पार्न केसम्म गरेका रहेछन् भन्ने मंगलबार प्रष्ट भएको छ। ओलीलाई ‘बा’भन्दा माथिको ‘हजुरबा’ दर्जा दिँदै आफ्ना धर्मपितातुल्य प्रचण्डलाई मन्चबाटै चेतावनी दिए– विचार गर्नुहोला।
उनले ओलीले सार्वजनिक रुपमै घृणा गर्दै आएका मेडिकल शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको समेत अपमान गर्न भ्याए।
बि एन्ड सी मेडिकल कलेज